I-France izovala ukuhlangana kwezihlobo okokuqala ngqa kusukela ngo-1791
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » France Izindaba Ezintsha » I-France izovala ukuhlangana kwezihlobo okokuqala ngqa kusukela ngo-1791
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ubugebengu • Amasiko • France Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Ukulalana kwezihlobo, ukuhlambalaza, nokulalana kwabantu ababili kwaba yicala ngo-1791 njengoba amabutho amavukela-mbuso aseFrance ayefuna ukususa ukuziphatha okuphefumulelwe kobuKristu okwakugxiliswe ubukhosi.
Uhulumeni waseFrance umemezele ukuthi uzokwenqabela ubudlelwano bocansi nezihlobo zegazi okokuqala ngqa kusukela ngo-1791.
Isihloko besikade singavumelekile kuso France amashumi eminyaka kuze kube ngu-2021, lapho u-Olivier Duhamel, umhlaziyi wezepolitiki ovelele, esolwa ngokuhlukumeza ngokocansi indodana yakhe yokutholwa ngeminyaka yawo-1980.
UDuhamel uvumile ukuthi lezi zinsolo zaziyiqiniso kodwa akazange abhekane namacala, njengoba ukulala nentsha kwakungelona icala ngaleso sikhathi.
Engxoxweni yakamuva, u-Adrien Taquet, FranceUNobhala Wezwe Wezingane, uthe uhulumeni uzovala ukuzalana kwezihlobo okokuqala ngqa eminyakeni engaphezu kuka-200. Ubuhlobo bobulili nezihlobo okwamanje busemthethweni eFrance ngaphandle kwalapho izingane zihilelekile.
Umthetho omusha uzoletha France ngokuhambisana nabaningi European amazwe avimbela ubudlelwano bobulili nesihlobo namalungu omndeni.
Ngonyaka odlule, uhulumeni waseFrance waletha umthetho okwenza kube yicala ukuba nobuhlobo bobulili nesihlobo esiseduze esingaphansi kweminyaka engu-18.
Umthetho omusha waseFrance uzokwenza kube yicala ukulalana kwezihlobo noma ngabe zombili izinhlangothi zingaphezu kweminyaka eyi-18.
Yize abazala besazokwazi ukushada, ungqongqoshe akakwazanga ukuqinisekisa ukuthi izofakwa yini imindeni yokutholwa.
Ungqongqoshe uthe uhambisana "nokuvinjelwa okusobala" okuzoletha iFrance ihambisane neningi lakho iyuniyani yase-Europe izizwe.
“Kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka emingaki, awubi nobuhlobo bobulili noyihlo, indodana yakho noma indodakazi yakho,” kugcizelela isikhulu sikahulumeni waseFrance, senezela “Akuyona indaba yobudala, akuwona umbuzo wabantu abadala abavumayo. Silwa nokulalana kwezihlobo. Izimpawu kumele zicace.”